Salaada Subax Si Aad Maalintaaga Ugu Bilawdid Ilaah | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Salaadda Salaadaha Subax Si Aad Maalintaaga Ugu Bilaabatid Ilaahay
Salaadaha Subax Si Aad Maalintaaga Ugu Bilaabatid Ilaahay
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda subax si aan maalinta ula bilowno Ilaahay. Rumaystayaal ahaan, waa inaan markasta baranno inaan maalin cusub la bilowno Ilaah. Waxaan ku martiqaadaynaa Ilaah ganacsiga maalinta iyada oo loo marayo salaadda. Ilaah, isagu laftiisu isuma casuumi doonin, ilaa aan ka garawno xaqiiqda ah inaanan waxba qaban karin la'aanteed gargaarka Eebbe, waxaa laga yaabaa inaannaan saxayn waxyaabaha.
Marka laga reebo ku shukrinta Eebbe aragtida maalin cusub oo aad hurdada ka soo kacdo, waxaa jira ducooyin aad adigu tidhaa subax kasta si aad xaq u dhawrto. Markuu Eebbe ku lug yeesho arrinta ragga, arrimuhu waxay ku shaqeyn doonaan sidii qorshooyinka loo qorsheeyay. Sidoo kale, waxaa jira kalsoonidaan iyo qanacsanaanta aan helno markasta oo aan ku tukado arin gaar ah ka hor inta aanan ka bixin guriga subaxa hore. Maqaalka ducadan salaadda subax inaad kubilaabto maalintaada ilaahay wuxuu kuu iftiimin doonaa meelaha muhiimka ah ee ay tahay inaad salaanta subax kasta taabato si aad uhesho maalin weyn. Waxaan ku baryayaa inaad sidaad u raacdo ducadan, in Eebbe isu muujiyo arrintaada magaca Ciise.
Midda kale waxa weeye, markaan maalinteenna ilaahay la bilaabayno, sharka ayaa laga ilaalinayaa. Qorniinku wuxuu leeyahay indhaha Rabbiga had iyo goorba waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah. Markii indhaha Rabbi ay indhahooda ku saaraan nin, waxaa jira kalsooni buuxda oo qofkaas loo dammaanad qaado, oo Qorniinka ayaa sheegaya in dhegihiisu ay u fiirsanayaan baryadooda. Tan macnaheedu waxa weeye markaan baryo subax ilaahay, wuu ina maqli jiray oo waa uu maqli jiray baryadayada. Waxaan amar ku bixinayaa maamulka jannada, in markaad bilowdo inaad maalintaada ku bilawdo maqaalkan ducada, ilaalinta Eebbe Weyne ayaa kugu soo dul degi doonta.
Dad kale oo u baahan duco sidan oo kale ah waa kuwa dadka u shaqeeya. Waxaa laga yaabaa inaad ka shaqeyso hay'ad shirkadeed halkaas oo lagaa filayo inaad maalin kasta la kulanto qodob cayiman. Xitaa haddii meesha aad ka shaqeysaa aysan ahayn urur shirkadeed, laakiin aad rabto inaad la kulanto bartilmaameed maalin kasta, waxa ugu fiican ee aad ku guuleysato waa inaad maalintaada Ilaah ku bilawdid salaadda. Qorniinku wuxuu leeyahay Waxaan indhahayga ku fiirinayaa buuraha, xaggay ka iman doonaan caawimaaddaydu? Caawimaaddaydu waxay ka iman doontaa Ilaaha sameeyey samada iyo dhulka.
Maanta, Ilaah ayaa ku siin doona caawimaadda aad u baahan tahay inaad maalinta ku maamusho magaca Ciise. Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay jacaylka naxariista leh ee Ilaah weligiis ma dhammaan doono; subax walba way cusub yihiin; Tani waa sababta waa inaad u cusbooneysiisaa nidarradaada salaadda subax kasta Ilaah. Markaad bilawdo inaad raacdo howshan, waxaan ku baryayaa isbedel ka sarraysa noloshaada iyo ganacsigaaga magaca Ciise.
Aabbaha jannada ku jira, waxaan kuugu mahadnaqayaa nimcada aad isiisay inaan ka mid noqdo kuwa nool saaka, Sayidow, magacaaga ha lagu weyneeyo magaca Ciise. Waan ku weyneeynayaa maxaa yeelay waxaad tahay ilaahey nolosheyda, waxaan kuugu mahadcelinayaa indhahaaga ilaalinta ee aan waligey iga seexan, waxaan kuugu mahadcelinayaa awoodda badbaadinta ee gacantaada midig ee had iyo jeer ka shaqeysa noloshayda, aabbo magacaagu ha noqdo lagu sarraysiiyay magaca Ciise.
Qorniinku wuxuu i fahamsiinayaa inay faa'iido badan tahay in lagu mahadnaqo Ilaah intaan isaga wax weyddiisto. Sababtaas awgeed, waxaan kuugu mahadnaqayaa jacaylka aabbonimo, xitaa marka aanan mudnayn. Dadku waxay ku faani karaan hodantinimadooda iyo xooggooda, laakiin adiguba waxaad ku faani kartaa xaqnimadaada. Adaa aamin ah Waxaan ku weynayaa magacaaga quduuska ah magaca Ciise.
Sayidow Ilaahow, sidaan maanta u ambaqaadayo inaan u shaqeeyo, waxaan kaga hor imanayaa mid walba oo ku socda jidkeyga. Wax kasta oo doonaya inay istaagaan jidkeyga sidii carqalad, waxaan ku baabi'inayaa dhiiga wanka ee magaca Ciise. Maxaa yeelay Qorniinku wuxuu leeyahay waan ku hor tegayaa oo waan hagaajin doonaa meelaha sare, waxaan amar ku bixinayaa in xooggaagu maanta hortayda ku sii socdo magaca Ciise. Wax kasta oo doonaya inay iga hor istaagaan guusha maanta, waxaan ku baabi'inayaa dabka ruuxa quduuska ah ee magaca Ciise.
Aabbo Sayidow, nin qaawan adigoon ilaalin. Waxaan ka baryayaa in awooda badbaadinta ee gacantaada midig ay maanta i wehelin doonto, markaan ka soo baxayo gurigayga, dabka ruuxa quduuska ah ayaa hortayda yaala, oo wuxuu baabi'in doonaa khatar kasta oo ku socota jidkayga magaca Ciise. Waxaan ku baryayaa ruuxa Ilaah, Ruuxa Quduuska ah, kaas oo ii sheegi doona waxa la sameeyo iyo meesha aan aadayo. Waxaan ka baryayaa in ruuxu igu soo dego magaca Ciise. Waxaan iska dhaafey xumaan kasta oo xun oo shaydaanku maanta diyaariyey. Waxaan ku kala soocayaa dhiigga wanka.
Aabbaha jannada ku jira, eraygaagu wuxuu leeyahay Sayidku waa adhijirka i jira, waxba u baahan maayo. Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa in maanta wax wanaagsani ugu baahnaan doonin magaca Ciise. Kuwa xaqa ah waxay filanayaan waa inaan la gaabin, taasi waa waxa Qorniinku leeyahay. Waxaan ku dul taaganahay balanqaadyada eraygan, waxaanan amar ku bixinayaa in wax kasta oo wanaagsan ama fikir kasta oo aan maankeyga ku qaatay maanta lagu gaari doono magaca Ciise. Waxaan ka baryayaa caawimaadda Ilaaha Qaadirka ah, nimcada Rabbi JIREH, ee ka dhigaysa halganka nin siman. Waxaan Ilaah ka baryayaa inay nimcadan oo kale maanta iigu timaado magaca Ciise.
Sayidow Rabbiyow, waxaan kaa baryayaa inaad maanta iga caawiso inaan dhammaystiro ujeeddada maalinta. Sayidow, ma doonayo in layla qaado dhawaaqyada qaylada ee hareerahayga ka dhigaya inaan lumiyo ujeedka maalinta. Waxaan ku baryayaa inaad iga caawiso inaan hadaf ku gaaro magaca Ciise. Waxaan ka baryayaa sidaan nabad ugu amba baxay, inaan nabad ku soo noqdo magaca Ciise.
article PreviousSalaadda Awoodda leh Waqtiyada Baahiyaha ee Baahiyaha
Next articleDucada Ilaalinta Hoyga Iyo Qoyska
Ducada Si Looga Baxo Deynta iyo Go'aanka Maaliyadeed
Sabuurradii 139 macnaheedu aayadda aayadda
Qodobbada Salaadda Si Loogu Soo Celiyo Barakooyinkii La Xaday Ee Riyada
VERSESFUL BIBLE VERSES